सुमन लम्साल, (चिसापानी - ५, स्याङ्जा (हाल पोखरा))
आफ्नै जहानको जवानी बन्धकी राखेर ।
र आएको छु आँखा नि बन्धकी राखेर ।
रिन तिर्दा नि तमसुक पाइनँ; जलाईदिएँ घर,
के गर्छस् साहु खरानी बन्धकी राखेर?
त्यती धेरै खुसी किन खोज्छ पुतलीले,
बत्ती सामु जिन्दगानी बन्धकी राखेर?
विचरीको पर्खाई खै कतिन्जेल रहला,
काखमा राख्ने सिरानी बन्धकी राखेर?
यहाँका क्याम्पस भन्ने कारखानाहरूमा,
देश पढाइन्छ राहदानी बन्धकी राखेर ।